Alahady 20 Septambra 2020. – FJKM
Miasà amin’ny fahatahorana an’ Andriamanitra
Ny Filazantsara araka an’i Matio dia iray amin’ny Filazantsara mitantara ny asa nataon’i Jesoa Kristy teto an-tany . Teo ny fampianarana maro nataony ho an’ny vahoaka fa nisy kosa ho an’ny mpianatra 12 lahy . Anisan’izay nampianariny ireto :
1- Tsy maintsy mifamela heloka
Jesoa dia manambara fa tsy maintsy mifamela heloka , tsy voafetran’ny isa , na fotoana na toerana . Ny isa eto dia fitopolo impito . Tsy manam-petra ny famelankeloka atao amin’ny havana, mpiara-mivavaka. Asa takiana ho an’izay tia ny rahalahiny ny famelankeloka atao amin’ny fanetrentena noho ny fahatahorana an’Andriamanitra . Mitondra fiadanana sy filaminana , firaisankina sy fifamelankeloka .
2-Nofafan’Andriamanitra ny trosanao
Rehefa nofafana ny trosanao , nahazo famindrampo dia tokony mba toy izany koa no atao amin’ny hafa. Ialao ny fitiavantena tafahoatra izay manakona ny maso tsy hahita sy tsy hahalala ny soa natao taminao. Tsarovy fa tsy tambo isaina ny trosantsika amin’Andriamanitra , tamin’ny teny ,tamin’ny asa, eny izay tsy tsaroantsika aza. Fa Andriamanitra nanome làlana hahazoantsika famelana ny fahotantsika rehetra ao amin’i Jesoa Kristy . Na toy inona na toy inona trosa ananantsika amin’olon-kafa dia tsinotsinona izany raha oharina amin’izay ananan’Andriamanitra amintsika . Aoka mba samy hamindra fo isika , satria namindrana fo ary miasà amin’ny fahatahorana an’ Andriamanitra .
Mba nahay namindra fo tamin’ny hafa ve ianao?